‘Fandokoana ambonin’ny Fahafatesana’: Ny Iraka Tanterahin’ny Mpanakanto Syriana iray Natao Fahirano tany Douma · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Desambra 2018 13:07 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Ελληνικά, Français, عربي, Español, Nederlands, English
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Desambra 2016)
Manaingo hazo Noely ao amin'i Douma natao fahirano i Akram Abo Alfoz. 24 Desambra 2016. Loharano.
“Hijanona eto izahay. Na ho doranareo aza ny taninay, hijanona eto amin'ny toerana nahaterahan'ny sivilizasiona izahay ary hamerina hanangana azy indray. Hanangana tetezana amin'ny alàlan'ny vatanay izahay ho an'ireo taranaka mba hiampitàny mankany amin'ny hoavy. Hanangana sivilizasiona iray vaovao izahay avy amin'ireo potipotiny sisa tavela tamin'ny tranonay. Hanangana hazo Noely avy amin'ny tafondro sy baombanareo izahay, ary handrehitra izany ho an'ny fandriampahalemana anatin'ny Ghouta anay maratra.”
Ireo no tenin'i Akram Suwaidan, na i Akram Abo Alfoz izay tiany kokoa iantsoana azy. Mpanakanto 37 taona avy any amin'ny tanànan'i Douma i Abo Alfoz, any amin'ny faritr'i Ghouta Atsinanana any Syria.
Nataon'ny fitondrana Assad sy ireo mpiara-dia taminy fahirano i Douma nanomboka tamin'ny fahavaratry ny 2014 (ary natao fahirano amin'ny ampahany nanomboka ny Oktobra 2013) miaraka aminà mponina tombanana ho 140.000 mbola ao amin'ny tanàna raha 500.000 ny isan'izy ireo talohan'ny ady. Tamin'ny Jona 2016, navela niditra tao ireo fanampiana sy sakafo vitsivitsy, saingy mbola mampidi-doza ho an'ny mponina foana ny toedraharaha, miaraka amin'ny nambaranà mpitsabo iray tamin'ny AFP (pejy voafafa), masoivoho mpampita vaovao iraisam-pirenena mitoetra any Frantsa, ny 3 Oktobra 2016 fa efa ritra ireo fanampiana.
Namela ny maro hahatsapa fa tsy misy fanantenana intsony izany. Saingy nisafidy ny hanohitra io fihetsehampo io i Abo Alfoz. Nandray ny andraikiny hampahafantarana izao tontolo izao ny miseho any Ghouta Atsinanana i Abo Alfoz tamin'ny fandokoany ambonin'ny fahafatesana, izay saika ara-bakiteny. Avadiny ho zavakanto ireo fitaovam-piadiana.
Sasany amin'ireo asatànan'i Akram Abo Alfoz. Nampiasaina teo ambany famelàna.
“Fialamboly efa namako hatramin'ny fahazazako ny fanaovana hosodoko”, hoy i Abo Alfoz tamin'ny Global Voices.
Mitoetra eo anilako izy io na dia sahirana amin-javatra hafa aza aho. Talohan'ny rivopanovàna Syriana, nentiko nanaraka ahy teny rehetra teny ny lokoko. Rehefa nanomboka ny rivopanovàna, somary nisitaka tamin'ny zavakantoko aho. Kanefa rehefa lasa rivopanovàna mitam-piadiana izany, niezaka namelona indray ny sampan-kazo oliva tato anatiko aho mba hisarihana ny sain'izao tontolo izao amin'ny kolontsainay, ny eritreritray ary ny fitiavanay ny aina sy ny fanantenana.
Ary araka izany, tamin'ny 2014, teraka ny “Fandokoana ambonin'ny Fahafatesana”.
Tiako nosarihina tamin'ny zava-manjo amin'ny ankapobeny aty Syria, indrindra ato amin'ny tanànan'i Douma izay misy ahy, ny sain'izao tontolo izao. Raha miandry ny fanomezany avy any amin'i Dadabe Noely ireo ankizin'izao tontolo izao, ny ankizinay kosa mahazo fanomezana avy amin'ny Dadabe Noely Syriana manafina endrika, i Rosia, ny fitondrana Syriana, ary i Iran, sy ny kalesiny manova endrika ho fiaramanidina MG Rosiana. Tiako naseho an'izao tontolo izao fa vahoaka natao hiaina sy hitia ny aina izahay, ary rivopanovàn-kevitra sy fahalalàm-pomba ny rivopanovanay.
I Akram Abo Alfoz eo am-piasàna. Nampiasaina teo ambany famelàna.
Nanontany ny Global Voices raha afaka namariparitra ny toejava-misy ankehitriny any Douma izy. Izao no nambarany:
Voatendry ho tanàna mampidi-doza indrindra eto an-tany amin'ny lafiny rehetra ny tanànan'i Douma, maka ny aim-bahoaka tsy manan-tsiny maro isan'andro ireo tafondron'ny fitondrana sy ny tafika an'habakabaka Rosiana, ankoatra ny fanaovana fahirano nisy efa 4 taona izao, sy ny fanapahana herinaratra, ny tsy fahampian-drano sy ny fahatapahan'ny fifandraisana ato anatin'ny tanàna nanomboka tamin'izany fotoana izany ankoatra ny fahasahiranan-tsaina tsy miato, ity fahatsapàna harerahan-tsaina izay manaraka anay mamakivaky ny hasarotry ny fiainana ity.
Sasany amin'ireo asatànan'i Abo Alfoz. Nampiasaina teo ambany famelàna.
Tena tsizarizary tokoa ny toejava-misy any Douma. Miaraka amin'ny faharavan'i Aleppo sy ny fitsanganan'ny fitondrana Syriana, matahotra ireo mponin'i Douma sy ny faritra midadasik'i Ghouta Atsinanana fa izy ireo no manaraka. Araka ny voalazan'ny AFP (pejy voafafa):
Milaza ireo mpiketrika mafana fo fa ahian'ireo mponin'i Douma ho fanombohana fanafihana an-tany tahaka ny fanosehan'ny tafika amin'izao fotoana mba hakany ny tanànan'i Aleppo iray manontolo ireo fanafihana an'habakabaka tamin'ny Alatsinainy [3 Oktobra].
Naverin'ireo mponina niresaka tamin'ny Vice, fitaovana iray hafa fampitam-baovao any Etazonia, izany tahotra izany vao haingana izay (pejy voafafa), ny 27 Desambra 2016. Nanambara izao tamin'ny Vice i Tariq (tsy tena anarany), mpampianatra Anglisy:
Tena matahotra mafy ny famindra-monina tsy azo ialàna ny vahoaka, tahaka ny niseho tany amin'ireo faritra hafa tany amoron'i Damaskosy, sy Aleppo ankehitriny.
Nitatira ny toejavatra vonjimaika eo amin'ny sehatry ny maha olona misy any Douma ny tetikasa Siege Watch miaraka amin'ity manaraka ity:
Niharanà fanafihana mahery vaika avy amin'ireo hery mpomba ny fitondrana ny manodidina an'i Douma nandritra ny fotoana fitaterana tamin'ny Aogositra – Okobra 2016, niteraka fahasimban'ny toedraharaha efa ratsy dia ratsy eo amin'ny sehatry ny maha olona. Ny 10 Septambra, lasibatry ny fanafihana an'habakabaka 10 i Douma tanatin'ny iray andro. Ny andro taorian'io, 11 Septambra, nitatitra ny tanàna fa tsy nisy fanafihana tsy nitsahatra nampiasa fitaovam-piadiana misy bala fanampiny, ny iray tamin'ireo namely ivotoerana iray nisy ankizy nilalao. Taterina matetika ny fampiasàna bala mandoro sy fitaovam-piadiana misy bala fanampiny.
Namaly izao i Abo Alfoz rehefa nanontaniana raha nanana ‘hafatra ho an'izao tontolo izao':
Tsy miraharaha ny hafatray intsony izao tontolo izao. Novonoina imason'ny rehetra izahay efa enin-taona izao ary tsy nampihetsim-po azy ireo izany. Nanary anay izao tontolo izao. Mitodika any amin'ny vahoakan'ny fireneko manokana sy ny rehetra manana ny feon'ny fieritreretana ny hafatro ary milaza aminy fa vahoaka miaina anaty fahafatesana izahay saingy milanja ny fanantenana miaraka aminay anatin'ny asa ataonay. Hisy andro iray hahazoanay ny fahafahanay sy ny voninahitray. Hisy andro iray hahazoanay izay antony nivoahanay niady.